Polska, umdanso kaSathane eSweden | Ukuhamba kwe-Absolut
Polska, umdanso kaSathane eSweden
Daniel | | I-Suecia
Okudume kakhulu ngemidanso yesintu ye I-Suecia yiyona Poland (akumele kudidaniswe ne- i-polka noma i-polka, edabuka eYurophu Ephakathi). Lo mdanso, okhona cishe kuyo yonke imikhosi yendabuko yezwe, futhi unomlando othakazelisayo ngemuva kwawo, owaziwa ngegama "Umdanso kaDeveli".
Ngokungafani nalokho okwenzeka kwamanye amazwe aseYurophu, eSweden umculo wesintu (umagazine) iphila kakhulu kunakuqala. Kunamaqembu amaningi esintu ahlakulela la masiko amadala, adluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane. I- umabhebhana, igama elingahunyushwa ngokuthi "ukuhlangana kwabaculi", yimikhosi emincane yomculo, imicimbi ekahle yokusondelana nalesi siko somculo futhi uthole amandla kazibuthe wemidanso yaseSweden efana ne-polska.
Kusukela ngoJuni kuya kuSepthemba, le mikhosi yangaphandle ibanjwa ezweni lonke. Ngokuvamile, lena imihlangano emincane, yize eminye yayo, ngokwesibonelo, leyo ye I-Bingsjö, okwenzeka ekuqaleni kukaJulayi, kuhlanganisa izinkulungwane zabantu. Kuzo zonke izingoma ezijabulayo ze-polska zihlala zizwakala.
1 Umsuka wePolska
2 IPolska eSweden
2.1 Izinhlobo zesifunda
3 Inganekwane uDeveli
Njengoba igama layo liphakamisa, izimpande ze-polska zibuyela ethonyeni lobukhosi base Poland emazweni asenyakatho neYurophu ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX (ngesiSwidi igama elithi polska lisetshenziselwa ukubhekisa olimini lwesiPolish).
Kodwa-ke, izazi eziningi zithi ngaphandle kwegama, umdanso nomculo wepolska yaseSweden onakho izimpande zeScandinavia kuphela. Mhlawumbe ukuzalwa kwe-polska kwavela ekuhlanganeni phakathi kwamasiko ahlukene womculo, obekuzoguquka kube yimo yawo yamanje.
Iqiniso ukuthi kwamanye amazwe aseNordic afana ENorway, eDenmark o Finlandia I-polska nayo idanisiwe, noma kunjalo ngokuhlukahluka okuhlukile. I-polska yaseSweden ngumculo onesigqi esifanayo ne- amanga. Ukudansa, kudinga okungenani abantu abane, njengoba kwenzeka ne minuet. Kodwa-ke, i-polska idansiswa ngamandla amakhulu nangaphansi kwesizotha. Eqinisweni, ukuhlelwa kwayo nobuciko bokusetshenziswa kwayo kusondele kakhulu kuleyo yeminye imidanso yendabuko yaseBalkan kunemidanso yezicukuthwane eyavela kumasalon aseYurophu amahle ngekhulu le-XNUMX. Isibonelo esihle kakhulu sakho konke lokhu esinakho kokulandelayo ividiyo:
I-polska idlalwe yadansa eSweden amakhulu eminyaka. Isiko belilokhu liqhubeka lisuka kubaba liye endodaneni, yize izitayela ezahlukahlukene zesifunda ziye zavela ngokuhamba kwesikhathi.
Kusukela ngekhulu le-XNUMX kuya phambili, izingoma ezindala ezithandwayo zaqala ukubhalwa ngezikolo zomculo. Ngenxa yomsebenzi wabaculi abaningi, i-polska yasinda, njengoba kwase kuzonyamalala ngesikhathi sezimboni zezwe, esilethe ukuphuma kwabantu emaphandleni, ukushiywa kwezigodi eziningi kanye nokukhohlwa kwamasiko amaningi amadala.
Empeleni, intshisekelo ku- ukuthola i-polska kuvela ngemuva kweMpi Yezwe II, ngemizamo eminingi yangasese yamaqembu amasiko namasiko, eheha inkumbulo namasiko abantu abadala kakhulu abavela ezifundeni ezahlukahlukene zezwe. Ama-polskas amaningi amadala asindisiwe futhi umculo wawo wadlalwa futhi emashumini eminyaka ngemuva kokugcina ukudlalwa.
Ngaphakathi kweSweden, izitayela ezahlukahlukene ze-polska ziyahlukaniswa ngokuya ngesifunda ngasinye. Lezi yizinhlobo ezithandwa kakhulu:
La Inothi le-XNUMX polska, bushelelezi futhi bufane kakhulu, kusinwa eningizimu yeSweden, ikakhulukazi esifundeni sase IScania kanye nogu lolwandle IsiBaltic.
La inothi lesishiyagalombili polska Idansa cishe ezweni lonke, yize idume kakhulu esifundeni esimaphakathi se- Dalarna.
La polska kathathu isitayela esivamile sezifunda ezinezintaba entshonalanga yeSwedenIVärmland, iJmtland y Harjedalen), esiseduzane kakhulu nomngcele waseNorway.
Kodwa, Kungani ipollka yaziwa ngokuthi "umdanso kaDeveli"? Leli gama linomsuka wenganekwane enelukuluku.
Inganekwane "yomdanso kaDeveli"
Njengoba kungabonakala kuvidiyo engenhla, ifayela le- imfumbe ithuluzi elibaluleke kakhulu lapho kudlalwa i-polska. Kwesinye isikhathi amanothi e-violin ayelula futhi afinyelela amathoni aphakeme kakhulu kangangokuba asikhumbuza imisindo yezilwane noma ngisho nomculo ovela komunye umhlaba.
Inganekwane ithi ngesinye isikhathi, iqembu labantu abavela edolobheni laseSweden labiza UHorga babuthana ku-violinist ukulalela umculo wakhe nokudansa. Ngesinye isikhathi, maphakathi nephathi, kwavela umlingiswa ongajwayelekile owayegqoke ngokuphelele ezimnyama owacela ukuvunyelwa ukudlala ivayolini. Lapho ephethe insimbi ezandleni zakhe waqala ukudlala ihubo lokulutha nelokushisa: i-polska.
Bekunamandla alowo mculo kangangokuba akekho obekhona angayeka ukudansa. Futhi baqhubeka baze bafa, bekhathele ngokuphelele. Amathambo abo aqhubeka nokudansa bagcina ngokugingqika ngentaba. Labo sizi abampofu babeyizisulu "zomdanso kaDeveli." Ngempela, kwakunguye uqobo, indoda eyindida emnyama, eyayikade idlala ivayolini ukuze ibayise esihogweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Polska, umdanso kaSathane eSweden
Ngingu-monse futhi uma ngiyithanda